Ithegi: iklasi ye-div | Martech Zone
Ithegi: iklasi ye-div
I-WordPress: Yenza ngokwezifiso i-CSS ukuba ipapashwe nguPapasho namhlanje
NgeCawa, Meyi 20, 2007 Lwesine, Okthobha 23, 2014 Douglas Karr
Kudala ndifuna ukongeza imifanekiso encinci yekhalenda kwizithuba zam okwethutyana ngoku. Ndabhala iiklasi ezimbini zomhla we-div kwaye ndabeka umfanekiso wesiqalo ngokwahlukileyo ngokusekwe ekubeni ingaba iposti ibhaliwe na namhlanje. Enkosi kuMichael H kwiiForam zeNkxaso yeWordPress, ekugqibeleni ndifumana ingxelo echanekileyo! Nantsi into endiyenzileyo. Ndinomfanekiso ongasemva osetiweyo kumhla weklasi: Okwanamhlanje i-div,